इनबाउन्ड मार्केटिंगको बारेमा # १ उजुरी Martech Zone
शुक्रबार, जनवरी 15, 2016 शुक्रबार, जनवरी 15, 2016 Douglas Karr
प्रत्येक महिना वा एक पटक, हामी हामीबाट बाहिर आउने मार्केटिंग एजेन्सीहरू र ग्राहकहरू जुन उनीहरूसँग हाम्रो साथ काम गरिरहेका छन् उनीहरूसँग काम गरिरहेका सम्भावितहरूबाट उस्तै उजूरी सुनेका छौं। इनबाउन्ड मार्केटिङ प्रयास। उल्लेख नगर्नु जुन यो गुनासो एक हो कि म आफैंलाई मेरो एजेन्सीसँग बनाउँदछु यदि मैले इनबाउन्ड मार्केटिंग वास्तवमा कसरी काम गरिरहेको छु भनेर बुझ्दिन भने।
गुनासो: हामीले हाम्रो वेबसाइटबाट कुनै व्यवसाय पाइरहेका छैनौं।
इनबाउन्ड मार्केटिंग उद्योगमा गम्भीर समस्या छ कि यसले कसरी वर्णन गर्दछ र कसरी इनबाउन्ड मार्केटिंग वास्तवमा काम गर्दछ। वेब उपस्थिति स्थापनाले तपाईंको वेबसाइटलाई एक ईन्जिनमा बदल्छ भन्ने धारणा छ जहाँ सम्भावना पछि सम्भावनाले तपाईंलाई खोजी वा सामाजिकमा फेला पार्छ, तपाईंको सामग्री पढ्दछ, र तुरुन्तै तपाईंको वेबसाइटमा फारम भर्दछ वास्तविकता होइन। यो हो क्रमबद्ध यो कसरी काम गर्दछ, तर व्यवसायको बहुमतले कहिले पनि यो मार्ग लिदैन।
आउनुहोस्, सर्वप्रथम खरीद व्यवहारको बारेमा छलफल गरौं। हामीले यस बारे लेखेका छौं माइक्रो-पलहरू र ग्राहक यात्राहरू पहिले र म तपाईंलाई पोष्ट पढ्न प्रोत्साहित गर्दछु। तथ्य यो हो कि व्यक्तिहरूले तपाईंलाई खोजी परिणामहरूमा फेला पार्दैनन्, तपाईंको गृह पृष्ठ भ्रमण गर्दछन् र तपाईंको सेवाहरू कि सरलताको साथ खरीद गर्दछन्। वास्तवमा, सिस्को द्वारा प्रदान गरिएको डाटाले देखाउँछ कि औसत व्यवसाय छ over०० भन्दा बढी भिन्न यात्रा (कृपया हामीले यसमा लेखेको ईबुक पढ्नुहोस्)।
यदि तपाईं सेवा कम्पनी हुनुहुन्छ (हाम्रो एजेन्सी जस्तै), यहाँ छ कि कसरी खरीद यात्रा अक्सर कार्य गर्दछ:
मुखको कुरा - ग्राहकले हामीलाई उनीहरूको सहयोगीलाई उल्लेख गर्दछ जब उनीहरूले हामी प्रदान गर्न सक्ने सहयोग खोजिरहेका हुन्छन्।
खोज - सम्भावनाले तपाईंको व्यवसायको लागि अनलाइन खोजी गर्दछ र तपाईंको वेबसाइट र सामाजिक फेला पार्छ।
वेबसाइट - त्यो संभावना हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्दछ। उनीहरूले हेर्दै छन् कि हामीसँग कुन विशेषज्ञता छ, संसाधनहरूले उनीहरूलाई निर्णय लिन मद्दत गर्न सक्दछ, उनीहरूसँग काम गरिरहेका टोली, र कुन प्रमाणपत्र वा ग्राहकहरू जुन हामीले पहिले नै काम गरिसकेका छौं।
सामग्री - सम्भावनाले तपाईंको सामग्री पढ्छ र थप जानकारी डाउनलोड गर्न वा अनुरोध गर्न सक्दछ।
पालना - त्यो संभावना कहिलेकाँही हामीसँग सामाजिक रूपमा जडान हुन्छ, हामी कस्तो किसिमको काम गरिरहेको देख्दछौं, हाम्रो नेटवर्कमा मानिसहरूलाई हामी कसरी काम गर्ने भनेर सोध्छौं र हामी उनीहरूको समस्या ह्यान्डल गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं।
सदस्यता - धेरै पटक संभावना किन्नको स्थितिमा हुँदैन, तर तिनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन् र त्यसैले तिनीहरू सम्पर्कमा रहनको लागि तपाईंको न्यूजलेटरको सदस्यता लिन्छन् र बहुमूल्य सल्लाहको साथ पाउनेछन्।
भेट्नु - त्यो सम्भावना हामी मार्फत जोड्दछ मुखको कुरा एक व्यक्तिगत परिचय प्राप्त गर्न को लागी जडान। बैठक पछि, तिनीहरूले निर्धारण गर्छन् कि उनीहरूले हामीलाई विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन् र हामी व्यापार गर्न थाल्छौं।
वा सम्पर्क - कहिलेकाँही सम्भावनाले हामीलाई सिधा ईमेल वा फोन मार्फत सम्पर्क राख्छ हामीसँग मिटिंग सेट अप गर्नका लागि।
त्यो प्रक्रिया दिईएको छ, जहाँ तपाईं देख्नुहुन्छ इनबाउन्ड मार्केटिङ फिट हुन्छ र यसले वास्तवमा तपाईंको व्यवसाय प्रदान गरिरहेको छ? त्यो आन्तरिक मार्केटिंग साइटहरूले प्राय: साझेदारी गर्ने भन्दा एकदम फरक फनेल हो जुन हो:
खोज - एक शीर्षक को लागी र तपाइँको साइट को क्रम मा खोज्नुहोस्।
डाउनलोड - रजिष्टर गर्नुहोस् र संपार्श्विक डाउनलोड गर्नुहोस्।
बन्द - एक प्रस्ताव र हस्ताक्षर प्राप्त गर्नुहोस्।
इनबाउन्ड मार्केटिंग आरआईआई
व्यवहारको यो दायरा दिईएकोमा, तपाईंको समग्र बिक्री र मार्केटि strate रणनीतिहरूको लागि तपाईंको इनबाउन्ड मार्केटिंगलाई श्रेय दिन कत्ति गाह्रो देखिन्छ? यदि तपाईंसँग एक आउटबाउन्ड बिक्री टोली छ भने, वस्तुतः प्रत्येक बिक्री त्यो टोलीलाई श्रेय दिइन्छ - विशेष गरी यदि उनीहरू अनुभवी छन् र सम्भावित सम्भावनाहरूको हेरचाह गर्दै छन् सम्भवतः तपाईंले व्यवसाय गर्न चाहानुहुन्छ।
इनबाउन्ड मार्केटिंगका लागि प्रश्नहरू समावेश गर्न आवश्यक छ:
जब तपाईं एक प्रॉस्पेक्ट बन्द गर्नुहुन्छ, ती गर्थे तपाईंको साइट भ्रमण गर्नुहोस् बिक्री प्रक्रियामा?
जब तपाईं एक प्रॉस्पेक्ट बन्द गर्नुहुन्छ, ती गर्थे एक न्यूजलेटर को लागी साइन अप गर्नुहोस्?
जब तपाईं एक प्रॉस्पेक्ट बन्द गर्नुहुन्छ, ती गर्थे डाउनलोड वा दर्ता गर्नुहोस् सामग्रीको लागि?
जब तपाईं एक प्रॉस्पेक्ट बन्द गर्नुहुन्छ, ती गर्थे खोज तपाइँको लागि अनलाइन?
यो त्यस्तो होइन कि तपाईंले सम्पूर्ण बिक्रीलाई उनीहरूको इनबाउन्ड मार्केटि visit भ्रमणमा श्रेय दिन सक्नुहुन्छ, तर यो सोच्नुहुन्न कि यसले बिक्री चक्रमा कुनै प्रभाव पार्दैन एक दुर्भाग्यपूर्ण गल्ती हो। यहाँ छ हाम्रो ग्राहकहरु को लागी केहि तथ्या's्कहरु:
यी तथ्या .्कहरूले कुनै पनि बोट वा भूत बोट ट्राफिकलाई फिल्टर गर्दछ र उनीहरूको वेबसाइटको एक वर्षमा स्नापशट प्रदान गर्दछ विश्लेषण। अघिल्लो वर्ष एक वेबसाइट छ जुन सुस्त थियो र वास्तवमा केही भाँचिएका तत्त्वहरू थिए ... एक टेक्नोलोजी कम्पनीको लागि दुर्भाग्य। तिनीहरू ११ आफ्नै खोज कम्पनीको नाम बाहिर खोज परिणाममा फेला परेका थिए, तीमध्ये page पृष्ठ २ मा। र उनीहरूको कम्पनीको नाम पनि केही समान नामको कम्पनीहरूसँग मिसिएको थियो। अब तिनीहरू खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठ हावी।
अब गुगलसँग पूर्ण कम्पनी प्रोफाइल छ, उनीहरूको सामाजिक प्रोफाइलहरू प्रदर्शित छन्, र खोजी ईन्जिन नतीजा पृष्ठमा सबलिlin्कहरूको साथ विस्तारित कम्पनी विवरण। तिनीहरू 406०21 बिभिन्न किवर्डहरूको लागि श्रेणी गर्दछ, पृष्ठ १ मा २१, पृष्ठ २ मा 1 38 र बाँकीहरू ट्र्याक्शन प्राप्त गर्न जारी राख्दै तिनीहरूले जैविक खोजीको साथ अधिकार निर्माण गर्दा।
तपाईलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ?
ईनबाउन्ड मार्केटिंग एक व्यवसाय को लागी एक ह्यान्ड्स अफ दृष्टिकोण छैन।
के तपाइँका कर्मचारीहरु तपाइँको सामग्री अनलाइन प्रमोट गर्दै छन्?
के तपाईं रणनीतिहरू अनलाइन पदोन्नति गर्न सार्वजनिक सम्बन्धको सहयोग भर्ना गर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाइँ अनलाइन सामग्रीको पदोन्नतिको लागि भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाईंको बिक्री टोलीले उनीहरूको सम्भावनाहरू बन्द गर्न मद्दत पुर्‍याउन सामग्री प्रयोग गर्दैछ?
के तपाईंको बिक्री टीमले मद्दत गर्ने सामग्रीमा प्रतिक्रिया प्रदान गर्दै छ वा मद्दत नगर्ने सामग्री?
मलाई लाग्छ कम्पनीहरू बिल्कुल पागल छन् जब उनीहरूसँग दर्जनौं कर्मचारी छन् र कसैले पनि कम्पनीले लगानी गरेको सामग्रीलाई प्रमोट गरिरहेको छैन। वकालत महत्वपूर्ण छ किनकि तपाईले आफ्नो पुग्दै जानु जारी राख्नु भएको छ। यदि मैले कुनै साथी वा सहकर्मीले उनीहरूको व्यवसायलाई बढावा देखेको छु र म निर्णय चरणमा छु, म उनीहरूले के प्रस्ताव राख्छु भनेर जान्न पूर्ण रूपमा जाँदैछु।
इनबाउन्ड मार्केटिंग अब विकल्प छैन। हामीले भर्खर एउटा यस्तो प्रॉस्पेक्टसँग भ्रमण गरेका थियौं जसले १। बर्षको लागि अनलाइन वेबसाइट बिना विज्ञापन गरिरहेको छ र उनीहरूले मलाई भने कि प्रति वर्ष सीसा प्रति लागत बढ्दछ र उनीहरूको नजिकको दर ड्रप जारी छ। व्यक्तिहरू उनीहरूसँग व्यापार गर्न हिचकिचाउँछन् किनभने उनीहरूको वेब उपस्थिति छैन। अब तिनीहरू हामीलाई कसरी सोध्न सक्छन् भनेर सोधिरहेका छन् अप बनाउन ती हराएका वर्षहरू जुन उनीहरूले लगानी गरेनन्। उनीहरूले भने कि उनीहरू प्रतिस्पर्धीहरूसँग हराइरहेका छन् जुनसँग राम्रो साइटहरू छन्, खोज परिणामहरूमा हावी छ, र सामाजिक मिडियामा संलग्न छन्।
छोटो उत्तर: तिनीहरू अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।
तर तिनीहरू अब इनबाउन्ड मार्केटिंगमा लगानी गर्न सक्दछन् जसले गति उत्पन्न गर्दछ, तिनीहरूलाई आधिकारिक सामग्रीको साथ अब अधिक बिक्री बन्द गर्न दिनुहोस्, र अनलाइन ध्यान र जागरूकता उनीहरूको ब्राण्डमा जारी राख्नुहोस्। निश्चित, क्र्यापी लीडहरू पहिला सुरुमा आउँनेछ, तर समयको साथसाथै उनीहरू बढि लिडहरू बन्द गर्दछन्, कम समय लिन्छन्, र एक टन पैसा बचत गर्दछन्।
यो अब है कि छैन वा एक तर्क छैन इनबाउन्ड मार्केटिङ काम गर्दछ। प्रत्येक प्रमुख कम्पनीले उनीहरूको सामग्री, खोजी र सामाजिक रणनीतिहरूमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्दैछन् उनीहरूले लगानीमा फिर्ताको लागि देखिरहन्छन्। आर्गुमेन्ट भनेको यो छ कि तपाईं लगानीको फिर्ताको मात्रा कसरी निश्चित गर्नुहुन्छ र श्रेय दिनुहुन्छ।
यदि तपाईंले लगानी गर्नुभयो भने इनबाउन्ड मार्केटिङ र खराब लीडफ्लो वा खराब गुणस्तरको नेतृत्व देख्दै हुनुहुन्छ, के तपाईं अन्य जानकारीमा ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ?
कति संभावनाहरु छन् तपाईंको साइट भ्रमण गर्दै तपाईंको इनबाउन्ड मार्केटि strategy रणनीति कार्यान्वयन गरेदेखि?
कति संभावनाहरु तपाईंको न्यूजलेटर को लागी साइन अप गर्नुभयो तपाईंको इनबाउन्ड मार्केटि strategy रणनीति कार्यान्वयन गरेदेखि?
कति संभावनाहरु डाउनलोड वा दर्ता गरिएको तपाईंको इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीति कार्यान्वयन गरेदेखि सामग्रीको लागि?
कति संभावनाहरु खोजी गरियो तपाइँको इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीति कार्यान्वयन गरेदेखि तपाइँलाई अनलाइन?
तपाईको कति ठूलो छ बिक्री बन्द हुन्छ तपाईंको इनबाउन्ड मार्केटि strategy रणनीति कार्यान्वयन गरेदेखि?
तिम्रो कति लामो छ बिक्री चक्र तपाईंको इनबाउन्ड मार्केटि strategy रणनीति कार्यान्वयन गरेदेखि?
इनबाउन्ड मार्केटिंगले प्रत्येक उद्योगको प्रत्येक कम्पनीको समग्र बिक्री र मार्केटिंगमा प्रदर्शनात्मक प्रभाव पार्दैछ। तर यो खाली ठाउँमा काम गर्दैन, यसले तपाईंको आउटबाउन्ड र अन्य बिक्री र मार्केटिंग रणनीतिहरूको साथ काम गर्दछ। आरओआई अधिकतम बनाउन, तपाइँ समर्पित हुनुपर्दछ र तपाइँ तपाइँको उद्योगमा गति र अधिकार निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न काम गर्नुपर्दछ। तपाईंको पाठकवृत्ति बढ्दै, तपाईंको नेटवर्क बढ्दै, बढ्दै र तपाईंको सामाजिक अनुसरणको साथ साझा… यी सबै कुराको लागि अविश्वसनीय रकम लिन्छ र प्रयास।
म त्यस्तो कार्यक्रम बेच्दै छु जुन म विश्वास गर्दिन। म त्यस्तो प्रणाली बेच्दै छु जुन हाम्रो एजेन्सीको साथ reach बर्षसम्म सीधा पुग्यो र हाम्रो राजस्व बढेको छ। र हामीले दर्जनौं मार्केटिंग र टेक्नोलोजी कम्पनीहरूका लागि पनि त्यस्तै गरेका छौं। जसले मूल्य र प्रयासको दीर्घकालीन प्रयासलाई कदर गर्दछ उसले नतिजालाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिँदछ।
हाम्रो उद्योगले (हाम्रो एजेन्सी सहित) ग्राहकहरूलाई शिक्षा दिन र सबै तथ्या providing्कहरू प्रदान गर्ने राम्रो कार्य गर्नु आवश्यक छ जुन कि इनबाउन्ड लगानी एक ग्राहकले उनीहरूको मार्केटिंग प्रयासमा गर्न सक्ने उत्तम लगानी हो।
टैग: इनबाउन्डइनबाउन्ड सुरागइनबाउन्ड मार्केटिङसुराकी
Data तरीकाहरू जुन ठूलो डाटा अनुप्रयोगहरूले परिणामहरू प्रदान गरिरहेका छन्